Impendulo yePirate Pirate, uMary Read
Malunga noMariya Funda
UMariya ufunde, kwi-engraving ekhethiweyo (idethi engaziwayo). I-Getty Images / i-Hulton Archive
Omnye wabantu abancinci ababaziyo abafazi, uMary Read (owaziwa ngokuba nguMark Read) wazalwa kwindawo ethile malunga no-1692. Ukunyanzelwa kwakhe kwimiqathango yokuziphatha ngokwesini kwamvumela ukuba aphile ngexesha ngexesha abafazi abangatshatanga banamathuba ambalwa okwenzela uphuhliso lwezoqoqosho.
UMariya wayeyifunde intombi kaPolly Read. UPolly wayenonyana ngendoda yakhe, u-Alfred Read; UAlfred wabuyela elwandle waza akazange abuye. UMariya waba ngumphumo wobuhlobo obuthile, emva koko. Xa usweleka unyana, uPolly wazama ukudlulisa uMariya njengonyana wakhe ekusetyenzisweni kwintsapho yomyeni wakhe ngemali. Ngenxa yoko, uMariya wakhula wagqirha njengenkwenkwe, waza wadlula inkwenkwana. Nangemva kokufa kukagogo kwaye imali yaqedwa, uMariya waqhubeka egqoka njengenkwenkwana.
UMariya, wayeseguqulwe njengendoda, akayithandi umsebenzi wokuqala njengomntu ongenamakhwenkwe, okanye umkhonzi, kwaye wasayinwa kwinkonzo kwinqanawa. Wayekhonza ixesha elithile emkhosini eFlanders, egcina ukubonakala kwakhe njengendoda ade atshade naye.
Ngomyeni wakhe, kwaye enxibe njengowesifazana, uMariya Wafunda wenyuka endlwini yakhe, kwaze kwaba yilapho umyeni wakhe efa kwaye akakwazanga ukuqhubeka neshishini. Wabhalisa ukuze asebenze eNetherlands njengejoni, ngoko njengomkhumbi onqwelwe kwinqanawa yaseJamani yaseJamaica - kwakhona eguqulwe njengendoda.
Le nqanawa yathathwa ngama-Pirates, kwaye uMariya wajoyina ama-pirates. Ngomnyaka ka-1718, uMary wamkela uxolo olukhulu olwenziwa nguGeorge I, kwaye wabhalisela ukulwa neSpeyin. Kodwa wabuyela, kungekudala, ukuba aguqulwe. Wajoyina iqela likaCaptain Rackam, "uCalico Jack," usengumntu.
Ngaloo nqanawa, wadibana no- Anne Bonny , owayezigugu njengendoda, naye, nangona wayeyinkosikazi kaKaputeni uRackam. Ngamanye ama-akhawunti, u-Anne wazama ukunyenga uMary Read. Nangona kunjalo, uMary wabonisa ukuba wayeyindoda, kwaye baba ngabahlobo, mhlawumbi abathandi.
U-Anne noKaputeni uRackam nabo bamkele ukuxolelwa ngo-1718 waza wabuyela ebukhosini. Babephakathi kwabo babizwa ngumbusi waseBahamian owavakalisa ukuba abathathu "njengePirates and Enemies kwiConald of Great Britain." Xa iinqanawa zathinjwa, u-Anne, uRackham noMary Bafunda ukukhanyela ukubanjwa, ngelixa abanye abasebenzi bafihla ngaphakathi kwebhokisi. UMariya waxosha ibhotile kwisibamba, ukuzama ukuhambisa abasebenzi ukuba bajoyine ukuchasana. Waxelelwa ukuba wamemeza esithi, "Ukuba kukho umntu phakathi kwenu, jongani nilwe kwaye nilwe njengendoda enokuba niyiyo!"
La mabhinqa amabini ayebhekwa njengabadlali abanobuqili, abanobugcisa. Inani lamangqina, kubandakanywa abathunjwa bee-pirates, bafaka ubungqina kwimisebenzi yabo, bethetha ukuba babegqoke "iingubo zamabhinqa" ngamanye amaxesha, ukuba "babeqalekisa nokufunga okukhulu" kwaye babephindwe kabili njengabafana.
Bonke babesetyenziselwa ukugwenxa kwiJamaica. Bobabini u-Anne Bonny noMary Bafunda, emva kokugwetywa, bathi babekhulelwe, ngoko abazange baxhonywe xa izidumbu zamadoda zazingekho. NgoNovemba 28, 1720. UMary Read wafa entolongweni ngomkhuhlane ngoDisemba 4.
I-Mary Read's Story Survives
Ibali likaMary Read kunye no-Anne Bonny batshelwa kwincwadi epapashwe ngo-1724. Umbhali "nguKaputeni uCharles Johnson," okungenzeka ukuba yi-nom de plume kaDaniel Defoe. Ezi zimbini zingase ziphefumlele ezinye zeenkcukacha malunga ne-Defoe 1721 heroine, i- Moll Flanders .
Ukwabelana ngesondo kwi-Moelian Movement
Yintoni ekhokelela ekufundisweni kwe-NAACP?
I-Top 25 Viral Kids IiVideos
Ukudibanisa Iibini eziPhakamileyo kwiNgesi
Ngaba i-Archeopteryx i-Bird okanye i-Dinosaur?
Umsebenzi wemozulu kwiRiphabhulikhi yeeNkqubo zangoku kunye neeRiptide